Abuur Koob Koowaad Sawir Wadaag ah oo ku saabsan Mac | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo abuuro album sawir Wadaag Koowaad ah Mac
Pedro Rodas | | Apple, Mac OS X, Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac, Tababarada
Waxaan ku guda jirnaa dhacdo ay qoysas badan oo ku nool Spain ay u dabaal dagayaan ama u dabaal dagayaan. Waa Wadajirka Koowaad ee kuwa yaryar ee guriga ku jira. Waa maalin iyaga u gaar ah inkasta oo ay tahay in waqtiyadan lumisay astaantii ay matali jirtay.
Mid ka mid ah waxyaabaha aan u baahnayn Wadaag kasta waa buugga sawirka, oo ah shaqo caadi ahaan loogu aaminay sawir qaade takhasus leh. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa kiiska oo aadan rabin inaad shaqaaleyso xirfadle oo aad rabto inaad isticmaasho qalabkaaga Apple, iPhone iyo Mac inaad isku dhiirrigeliso naftaada oo aad abuurto, tusaale ahaan, buuggaaga sawirka ah.
Dhowr baa jira web meesha aad ka qaban karto shaqada noocan ah, laakiin xaaladdan waxaan kuu sheegeynaa sida loo sameeyo Mac-gaaga dhowr tallaabo iyo kan cusub OS X Yosemite Sawirada app. Nidaamku waa mid aad u fudud iyo waqti yar gudahood, iyadoo kuxiran tirada boggaga aad dhigatay iyo sida aad u qaabeysay, waxaad yeelan doontaa album dhan oo sawiro ah oo aad ku qaadatay iphone-kaaga.
Way cadahay in tayada ugu dambeysa ee albumku aysan la mid noqon doonin waxa xirfadle kuu soo bandhigi karo, laakiin inaad adigu sameyso sidoo kale waxay leedahay qiimeheeda natiijooyinkuna runtii way fiican yihiin. Tallaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad u abuurto album sawir kuu gaar ah waa kuwa soo socda:
Waxa ugu horreeya, dabcan, waa in la sameeyo kulanka sawirka, ama kamarad ficil-celin ah ama iphone adiga kuu gaar ah, taas oo sidaad ogtahay, haddii ay tahay iPhone 6 ama 6 Plus waad hubsan kartaa inaad heli doontid sawirro aad u wanaagsan.
Hadda waa inaad dajiso dhammaan sawirada Sawirada kujira Mac. Marka lagaa keeno, waxaan kugula talineynaa inaad sameysid album si aad uga dhex heli karto dhexdiisa si aad maktabadaada sawirka u abaabusho.
Hada waa markaan tagayo daaqada dusheeda oo aan gujino tabta Mashaariicda. Kadib dhagsii "+" oo xulo "Buug".
Marka xigta waa inaad kala doorataa saddexda fursadood ee ay Apple ku siinayso, Jaangoyn, Jaangoyn ama Dabool Rustic. Ikhtiyaar kasta wuxuu ku siinayaa laba cabbir iyo laba qiime oo is xiga Maxaa intaa dheer waxaa lagugu wargelinayaa tirada bogagga aasaasiga ah ee ay yeelan doonto iyo inta ay kugu kici doonto bog kasta oo aad ku darto wax badan.
Markaan soo xulno nooca buugga aan abuureyno, waxaa nala weydiinayaa inaan xusho mowduuca buugga. Apple waxay na siineysaa xulasho udhaxeysa 14 mowduuc oo kala duwan. Waxay kuxirantahay dulucda waa sababaha aad ka heli karto boggeeda. Waxaan kugula talineynaa inaad si deggan u eegto mowduucyada jira si natiijada ugu dambeysa ay u noqoto tan ugu fiican.
Haatan waxaa imanaya talaabada ugu horeysa ee male-awaalkaagu u baahan yahay inaad sawirada ku rido dalool kasta oo bog kasta ka mid ah oo lagu soo saaray buugga. Si tan loogu sameeyo qaybta midig ee hoose ee shaashadda waa inaad gujisaa «Kudar sawir», ka xusho maktabadda sawirada oo aqbal. Hadaad ogaato dalabku wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka aad si aan kala sooc lahayn u geliso sawirrada «Buuxi otomaatig ah ". Haddii aadan xiiseyneynin waxaad sameyn kartaa gacanta.
Si aad u awoodo inaad wax ka bedesho muuqaalka bogagga waa inaad laba-gujisaa mid ka mid ah wayna ballaaraysaa, oo ku tusaysaa sawir kasta hoostiisa badhanka «Fursadaha».
Dusha sare ee daaqadda dhinaca midig waxaad ku leedahay saddex icons oo ah waxay kuu oggolaanayaan inaad beddesho astaamaha buugga "posteriori".
Si loo dhammeeyo iibsiga, guji Buugga Iibso. Maalmo yar gudahood waxaad buuggaaga ku haysataa gurigaaga oo la soo buuxiyo lana soo bandhigo leh tayada qeexaysa Apple.
Sidaad u aragto, waa hab aad u fudud oo aad ku abuuri karto buuggaaga buugga ah oo loogu talo galay Wada-tashiga Koowaad ee wiilasha ama gabdhaha reerka ama dadka aqoonta u leh. Isla mar ahaantaana aad ku raaxaysato aragtida sida abuurkaagu u muuqdo, hadhow waad ku raaxeysan kartaa wakhti kasta oo aad ku aragto iyada oo la xusuusto maalintaas cajiibka ah. Hore u soco oo shaqada tag, wali waxaad kujirtaa waqtigiisii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Sida loo abuuro album sawir Wadaag Koowaad ah Mac
Sideen shaashad ugu dhejiyaa sawir?
Mac-gaagu miyaanu si sax ah ula midoobayn iCloud? ... waxaan ku siineynaa xalka
Sida loo iibsado Mac aad isticmaashay si badbaado leh